Motocross – 4H Honda 2016 : hifampitana amin-dry Ted Boyaval i Van Der Westhuizen | NewsMada
Motocross – 4H Honda 2016 : hifampitana amin-dry Ted Boyaval i Van Der Westhuizen
Tsy foana fa niova daty. Hotanterahina ato ho ato ny fifaninanana “4H Honda” eo amin’ny motocross. Anisan’ny hifampitana amin’izany ry Ted Boyaval, tompondaka farany, sy ilay Afrikanina Tatsimo, Van Der Westhuizen. Hangotraka ny fihaonana.
Raikitra. Somary hiova filamatra ny fifaninanana motocross nampitondraina ny anarana “4H Honda” amin’ity. Araka izany, hotanterahin’ny orinasa Madauto miaraka amin’ireo mpanohana azy, ny 20 marsa izao, eny amin’ny toeram-pifaninanana Total Karting Imerintsiatosika, ny hetsika raha teny Ambohimanga hatrany izany nandritra ny roa taona.
Tsy vitan’izay fa ezahin’ireo mpikarakara hosokafana amin’ireo mpanamory vahiny avy any ivelany ny fifaninanana. Noho izany, maromaro ireo mpanamory vahiny handray anjara amin’ny fifaninanana amin’ity indray mitoraka ity.
Hiady ny fihaonana, anisan’ny hifampitady amin-dry Ted Boyaval sy Rasanjison Lalà (team Madauto), mitondra ny Honda CRF 250R, ilay Afrikanina Tatsimo, Van Der Westhuizen, mitondra Husqvarna FC 350. Voalaza fa mpanamory manana filaharana tsara ao Afrika Atsimo, ity farany. Eo ihany koa ireo mpanamory renioney miisa fito, ka anisan’izany ry Dominique Fontaine sy Alain Paris, sns. Ankoatra izay, efa mivelatra amin’ireo mpanamory avy any amin’ny faritany ihany koa ny “4H Honda”, satria ahitana ireo avy any Nosy Be sy Farafangana.
Hatreto, mahatratra 32 ireo ekipazy efa nisoratra anarana amin’ny fifaninanana. Izany hoe, efa maherin’ny 60 ireo mpanamory hiady ny lohany amin’izany. Tsiahivina, fa i Ted Boyaval sy ilay Renioney, Laurens Gautier, no tompondaka farany, ny taona 2015. Andrasana kosa ny fandraisan’anjaran-dRazafimahefa Tsirava na Tsitsi, nandrombaka ny dingana voalohany amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, nampitondraina ny anarana “Enduro Sherco” farany teo sy ry Claudio Tida.
Etsy andaniny, hisy trano heva maromaro hitsangana eny an-toerana ka hisy toerana voatokana ho an’ny ankizy fotsiny. Mandritra io hetsika io ihany koa no hampisehoan’ny orinasa Madauto ny vokatra vaovaon’ny marika Honda Africa Twin 1000, sns.